Chemours ကုမ္ပဏီ၏ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ကာလတို၊ အမြတ်အစွန်း၊ ၀ င်ငွေအရင်းအနှီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ YTM ၏ ၇% ထက်ကျော်လွန်သောအမြတ်အစွန်း - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B7B စျေးကွက်သတင်း
Chemours Company Bonds၊ ကာလတို၊ အမြတ်အစွန်း၊ ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ 7% YTM ကျော်လွန်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 22, 2019 နိုဝင်ဘာလ 21, 2019 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
$ 1.2 ဘီလီယံ၏အသားတင်ရောင်းအား။
$ 283 သန်း၏ EBITDA ညှိ။
မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများတွင်ကုမ္ပဏီ၏ Opteon ရေခဲသေတ္တာကိုပိုမိုအသုံးပြုလာခြင်း။
ယခုအပတ်၏နှောင်ကြိုးပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက် ရေ တစ် ဦး ကဖန်တီးဓာတုကုမ္ပဏီကြည့်ရှုသည် DuPont သည် 2015 တွင်လည်ပတ်သည်. Chemours ကုမ္ပဏီ (NYSE: စီစီ) ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ် fluoroproducts, ဓာတုဖြေရှင်းချက်နှင့် တိုက်တေနီယမ်နည်းပညာများ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (ဆေးသုတ်၊ အင်္ကျီ၊ ပလတ်စတစ်၊ အလှကုန်နှင့်အစားအစာများတွင်အသုံးပြုသည်) အပြင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည် Opteon ™, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောရေခဲသေတ္တာ။ ကုမ္ပဏီ၏ဒုတိယသုံးလပတ်ရလဒ်များမှပေါ်လွင်ချက်များတွင် (အပေါ်ကျည်ဆံများကိုကြည့်ပါ).
Chemours သည်လက်ရှိမိဘကုမ္ပဏီဟောင်းနှင့်တရားစွဲဆိုမှုပြုလုပ်နေသည်။ DuPont (NYSE: DDDuPont သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဓာတုဗေဒယူနစ်ကိုချွတ်ပစ်လိုက်သောအခါ Chemours သည်နောက်ဆုံးတွင်စုပ်ယူခဲ့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကုန်ကျစရိတ်ကိုအလွန်အမင်းလျှော့တွက်သည်ဟုသူကဆိုခဲ့သည်။ မြတ်များနှင့်စတော့ရှယ်ယာ buybacks ၌တည်၏။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၅ ငွေချေးစာချုပ်များသည်စက်မှုဓာတုဗေဒနယ်ပယ်တွင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန်ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအထွက်နှုန်းမှရင့်ကျက်မှုနှုန်း ၇.၅% နှင့်အတူ Durig's ၏အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်မှု Fixed ဝင်ငွေ2(FX2) မြင့်မားသောဝင်ငွေစီမံခန့်ခွဲဝင်ငွေခွန်အစုစုအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၏စုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်။
Chemours ကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးမားသောသတင်းမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Chemours မှခွဲထွက်ခဲ့သော DuPont အားတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်သည်။ Chemours ၏တရားစွဲဆိုမှုတွင်ဓာတုကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် DuPont က“၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒယူနစ်၏လည်ပတ်မှုအား Chemours အမည်ရှိကုမ္ပဏီအသစ်သို့သရုပ်ဖော်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏သမိုင်းဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။တရားစွဲဆိုမှုအရ DuPont's Project Beta သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်အထူးသဖြင့် Performance ဓာတုဗေဒယူနစ် (နောက်ဆုံးတွင် Chemours ဖြစ်လာခဲ့သည်) ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဤယူနစ်သည်စက်မှုနှင့်အထူးဓာတုပစ္စည်းများကို ပြုလုပ်၍ ရောင်းသည်၊ ဓာတုဖြစ်စဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဓာတုဘေးထွက်ပစ္စည်းများကိုဖန်တီးသည်။ ဤဘေးထွက်ပစ္စည်းများ“ကြိုတင်ထုတ်လွှတ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြန်လည်ကုစားခြင်းနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းနည်းပညာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်အပါအဝင် DuPont ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာတာ ၀ န်များစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။"
ဟုတ်ပါတယ်, DuPont ဖော်ပြထားသည် "Chemours ၏ပြောဆိုချက်များသည်အကျိုးမရှိဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။DuPont သည်၎င်း၏သမိုင်းဝင်တာဝန်များအတွက် Chemours မှအကန့်အသတ်မဲ့ခံစားခွင့်ရှိသည်ဟုအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ Chemours သည်တရားရုံးအားတရားမ ၀ င် ၀ င်ငွေအဖြစ်ကြေငြာရန်ကြေငြာချက်အားတရား ၀ င်ရှာဖွေခြင်းအပြင် DuPont မှဒေါ်လာ ၃.၉ ဘီလီယံခွဲဝေထားသောအမြတ်အစွန်းကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Trian ကိုတားဆီးရန်အတွက်ငွေကြေးကုန်ကျမှုကို spinoff မှပြဌာန်းခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှု။ အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုနေဆဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။ DuPont အမှုအားပယ်ဖျက်ပြီးခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့တရားစွဲဆိုမှုကြားမှ Chemours ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့သည့်အောင်မြင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်အားဖြင့်၎င်းသည်အစုရှယ်ယာရှင်များအားအမြတ်အစွန်းများနှင့်စတော့ရှယ်ယာပြန်လည်ဝယ်ယူမှုများသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောသို့မဟုတျကနျြးမာသောတာဝနျမြားကိုမတတျနိုငျတော့ပါ။
မေလတွင်တရားစွဲဆိုမှုအပြီးတွင် Chemours ကုမ္ပဏီ၏သြဂုတ်လတွင်သြဂုတ်လအတွင်းဒုတိယသုံးလပတ် (၂၀၁၁ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ကုန်ဆုံးသည့်သုံးလ) အတွက်ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒုတိယသုံးလပတ်ပေါ်လွင်ချက်များတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည် -
Chemours သည် Q1.4 တွင်အသားတင်ရောင်းအားဒေါ်လာ ၁.၄ ဘီလီယံရရှိခဲ့သည်။
ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက်စုစည်းထားသော EBITDA သည်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၂၈၃ သန်းရှိသည်။
ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်ကုမ္ပဏီသည်အစုရှယ်ယာရှင်များအားအမြတ်အစွန်းများနှင့်ရှယ်ယာပြန်လည် ၀ ယ်ယူမှုများမှတစ်ဆင့်ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
တစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးအတွက် Q2 အတွက်အနှုတ်လက္ခဏာငွေသားစီးဆင်းမှုရှိသော်လည်းကုမ္ပဏီသည်ဒုတိယသုံးလပတ်၏ပြီးခဲ့သည့်လတွင်အပြုသဘောဆောင်သည့်အခမဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Q2 သည်မိုဘိုင်း application များတွင်ကုမ္ပဏီ၏ Opteon ™ HFP ရေခဲသေတ္တာကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် Opteon ™သည်အနိမ့်ဆုံး GWP (ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအလားအလာ) ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
Chemours ဥက္ကPresident္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည်ကုမ္ပဏီ၏ဒုတိယသုံးလပတ်လုပ်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အ ၀ မကျေနပ်သော်လည်း Mark Vergnano သည်ကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုအပေါ်ကတိကဝတ်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒုတိယသုံးလပတ်မှာမျှော်လင့်ထားသည့် Ti-Pure ™ဝယ်လိုအားနှင့်ဥရောပသို့တရားမ ၀ င် HFC ရေခဲသေတ္တာများတင်ပို့မှု၏သက်ရောက်မှုများအပါအ ၀ င်မျက်နှာစာများစွာအတွက်စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြissuesနာနှစ်ခုစလုံးသည်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပမာဏကိုသက်ရောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်နှင့်အာရှရှိ Opteon မိုဘိုင်းရေခဲသေတ္တာများတိုးမြှင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ထက်ပိုများခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရလဒ်များကိုကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရန်နှင့် Chemours ၏ဘဏ္performanceာရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။"
Chemours Company (NYSE: CC) သည်ဓာတုဗေဒစွမ်းအားဖြင့်ရောင်စုံ၊ Chemours သည် fluoroproducts၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များနှင့်တိုက်တေနီယမ်နည်းပညာများတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေသည့်ထုတ်ကုန်များ၊ လျှောက်လွှာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ဓာတုဗေဒအခြေခံသည့်တီထွင်မှုများနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းများကျယ်ပြန့်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုဖောက်သည်များအားပေးသည်။ Chemours ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအအေးနှင့်လေအေးပေးစက်၊ သတ္တုတွင်းနှင့်အထွေထွေစက်မှုထုတ်လုပ်မှု, ပလတ်စတစ်နှင့်ကုတ်အင်္ကျီများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်ရှားသောထုတ်ကုန်များမှာ Teflon ™၊ Ti-Pure ™, Krytox ™, Viton ™, Opteon ™, Freon ™နှင့် Nafion ™ကဲ့သို့ထင်ရှားသောအမှတ်တံဆိပ်များပါ ၀ င်သည်။ Chemours တွင် ၀ န်ထမ်း ၇၀၀၀ ခန့်နှင့်မြောက်အမေရိက၊ လက်တင်အမေရိက၊ အာရှပစိဖိတ်နှင့်ဥရောပရှိဖောက်သည် ၃,၇၀၀ ခန့်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀ န်ထမ်း ၇၀၀၀ နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ၂၈ ခုရှိသည်။ Chemours သည်ဝဲလ်မင်တန်၊ ဒယ်လာဝဲတွင်အခြေစိုက်ပြီး NYSE တွင် CC သင်္ကေတစာရင်းဝင်သည်။
Opteon နှင့်အနိမ့် GWP ထုတ်ကုန်များအတွက်ဝယ်လိုအားတိုးပွားလာ
မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောအစီရင်ခံစာအရ GWP (ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအလားအလာ) ရေခဲသေတ္တာစျေးကွက်သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရှိရာမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈.၇ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိရန်ခန့်မှန်းထားပြီး ၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်းနှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်း ၁၁.၇% တိုးတက်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ၀ ယ်လိုအားတိုးလာခြင်း၏အဓိကမောင်းနှင်အားမှာ GWP ထုတ်ကုန်နိမ့်ကျသောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများရှိ CFC, HCFC နှင့် HFC ရေခဲသေတ္တာများအားဖယ်ရှားရန်ဥပဒေများတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂရှိ F-gas ဥပဒေနှင့် US အစိုးရမှချမှတ်သော SNAP အစီအစဉ်တို့ကဲ့သို့ဥပဒေသည် HFC's မှ (အိုဇုန်းလွှာလျော့နည်းစေသည့်) မှထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဤတိုးပွားလာသောဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန် Chemours ကုမ္ပဏီသည်ပိုမိုတင်းကြပ်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့မည့်ရေခဲသေတ္တာ Opteon ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Opteon ™ရေခဲသေတ္တာများတွင်သုညရှိသည် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးမှုအလားအလာ (ODP) အလွန်နိမ့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအလားအလာ (GWP)။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကိုကောင်းစွာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဥရောပတွင် Opteon ™သည်စူပါမားကတ်အအေးခန်းတွင်အအေးခန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ F-gas စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ကုမ္ပဏီများကိုကူညီသည်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတော်တော်များများသည်သူတို့၏လူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်လေအေးပေးစက်အသုံးချမှုများအတွက် Opteon ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော, မစ်ဆူဘီရှီလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ဂျွန်ဆင်ထိန်းချုပ်မှုများ.
2019 ၏ပထမနှစ်ဝက်သည်စီမံခန့်ခွဲမှု (သို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာရှင်များ) ကမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအမြတ်အစွန်းမရရှိသော်လည်း၊ အတိုးအကျုံး ၀ င်မှုသည်ထုတ်ပေးသူ၏လက်ရှိကြွေးမြီအဆင့်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်စွမ်းကိုတိုင်းတာသည်။ ၎င်း၏လတ်တလောသုံးလပတ်ကာလအတွက် Chemours ကုမ္ပဏီသည်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၆၁ သန်းနှင့်အတိုးနှုန်းဒေါ်လာ ၅၂ သန်းရှိခဲ့သည်။ ၃.၁x ခိုင်မာသောအကျိုးခံစားခွင့်ကိုတွက်ချက်သည်။
အခြားမက်ထရစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ငွေဖြစ်လွယ်မှုအဆင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုလက်ဖြင့်ငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ လည်ပတ်နေသောအကြွေးစနစ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ ထပ်မံ၍ Chemours သည်အတော်ခိုင်မာနေပုံရပြီး၎င်း၏ငွေသားပမာဏမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇွန်လ ၃၀ ရက်တွင်ဒေါ်လာ ၆၃၀ သန်းရှိခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီ၏လည်ပတ်နေသောအကြွေးစနစ်တွင်ဒေါ်လာ ၆၉၇ သန်းထပ်မံရရှိနိုင်သည်။
bondholders များအတွက်အန္တရာယ်မှာ Chemours သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ကြယ်ငါးပွင့်ထက်နည်းသောပမာဏမှပြန်လည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်း၊ အခမဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ Titanium Dioxide (TiO2019) ထုတ်ကုန်များတွင်အရောင်းအရှိန်အဟုန်ပြန်လည်ရရှိခြင်းရှိမရှိဖြစ်သည်။ (တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသုတ်ဆေးများ၊ အင်္ဂတေများ၊ ပလတ်စတစ်များ၊ အလှကုန်များနှင့်အချို့သောအစားအစာများတွင်အသုံးပြုသည်။ ) Q2 တွင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်ကုန်များရောင်းချမှုသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။2ခုနှစ်တွင် Chemours ရောင်းအား၏ 2018% သည်၎င်း၏ TiO48 ထုတ်ကုန်ကနေရောက်လာတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုက Q2 ကျဆင်းခြင်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် TiO2 စက်မှုလုပ်ငန်း၏သိသိသာသာသဘောသဘာဝ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်အခွန်များအပြင် ၂၀၂၀ တွင်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအလားအလာများကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကုမ္ပဏီကမကြာသေးမီကပြောကြားခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ TiO2 ဖောက်သည်များအတွက်အွန်လိုင်းအမှာစာပေါ်တယ်ပေါ်တယ်။ ကြောင်းစနစ်စတင်ကတည်းက TiO2020 အမိန့်အတွက်တိုးလာလှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
Dupont အားတရားစွဲဆိုသော Chemours တရားစွဲဆိုမှုအပြင် Chemours ကုမ္ပဏီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြုလုပ်ခဲ့သောလူတန်းစားအရေးယူမှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအသစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ တရားခံများသည် Chemours သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုများအတွက်သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာစာရင်း ၀ င်ခဲ့ကြောင်း၊ ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်ဖြားခဲ့သည်။။ နှစ်ခုအဓိကတရားစွဲမှုယခုဆိုင်းငံ့ထားနှင့်အတူဖြစ်စေထံမှတစ် ဦး ရှုံးသောအခါရလဒ်ကို Chemours အမြတ်အစွန်းအပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Durig Capital ၏ FX2 တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်တစ် ဦး ချင်းငွေချေးစာချုပ်များကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငွေချေးစာချုပ်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအကြားအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းကြောင့်အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စွန့်စားရမှုလျော့နည်းသည်။ FX2 အစုရှယ်ယာရှင်များသည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအားတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ငွေချေးစာချုပ်များကိုရွေးချယ်သောနေရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် FXXNUMX အစုစုသည်သမိုင်းတွင်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။
Chemours ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၅ ငွေချေးစာချုပ်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆင့်နီးပါးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏လတ်တလောသုံးလပတ်တွင်ရုန်းကန်မှုများရှိနေသော်လည်းထူးခြားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဖောက်သည်များကိုကတိပြုသည်။ bondholders များအတွက်အတိုးအကျုံး ၀ င်သည်။ Chemours တွင်ဆိုင်းငံ့ထားသောတရားစွဲဆိုမှုများ၏ရလဒ်ကိုခန့်မှန်းရန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်းကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များသည် ၀ ယ်လိုအားရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးလတ်တလော ၀ င်ငွေခေါ်ယူမှုတွင် DuPont ၏ဝတ်စုံကိုစီအီးအိုမှမှတ်ချက်ချသည်။Chemours သည်လတ်တလောတွင်ဒေဝါလီခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်တိုင်ကြားချက်တွင်မည်သည့်နေရာ၌မျှကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ခိုင်မာသောဘဏ္financialာရေးအခြေအနေတွင်ရှိသည်။Chemours ၏ ၂၀၂၅ ငွေချေးစာချုပ်များသည်ယခုအခါလျှော့စျေးဖြင့်ကုန်သွယ်နေပြီး၎င်းတို့ကို ၇-၅% ရရန်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောအထွက်နှုန်းကိုပေးသည်။ စက်မှုနှင့်အထူးဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်းသည်ဤချည်နှောင်ခြင်းကြောင့် Durig's နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည် Fixed ဝင်ငွေ2(FX2) မြင့်မားသောဝင်ငွေစီမံခန့်ခွဲဝင်ငွေခွန်အစုစု.
ထုတ်ပေးသူ: Chemours ကုမ္ပဏီ
သင်္ကေတ: NYSE: စီစီ
ရင့်ကျက်မှု:5/ 15 / 2025
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ: Ba3 / BB-
စျေးနှုန်း ~ 98.0
ရင့်ကျက်မှုသို့ရောက်သည်: ~ 7.5%
ဖွင့်လှစ်ခြင်း: Durig Capital နှင့်အချို့သောဖောက်သည်များသည် Chemours ၏မေလ ၂၀၂၅ တွင်ငွေချေးစာချုပ်များတွင်နေရာယူထားနိုင်သည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: အထွက်နှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းညွှန်းကိန်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနပြုချိန်မှပြနေကြသည်ကိုသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံစာများသည်မည်သည့်လုံခြုံရေးကိုမဆိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပွဲစား / ရောင်းဝယ်သူမဟုတ်ပါ။ အစီရင်ခံစာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံသို့ဖြန့်ဝေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွင် Durig Capital မှတင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် Durig Capital မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များမဟုတ်သကဲ့သို့လုံခြုံရေး ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီမှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုတောင်းခံသင့်သည်။
2025 AC လေအေးပေးစနစ် အစညျးအနှောငျ နှောင်ကြိုးစျေးကွက် Bond သုတေသန Bond ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ငွေချေးစာချုပ်များ CC ဓာတုဖြေရှင်းချက် ဓာတုပစ္စည်းများ ဆေးရုံ Chemours ကုမ္ပဏီ cn အများပိုင်သတင်း ကူပွန် DD Dupont ရေ ဘဏ္ဍာရေး Fixed ဝင်ငွေခွန် fluoroproducts ဖုန် မြင့်မားသည် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှု စိတ်ဝင်စားမှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး စျေးကွက်သုတေသန ရင့်ကျက်မှု NYSE: စီစီ NYSE: DD Opteon ပလတ်စတစ် စျေးနှုန်း ရေခဲသေတ္တာ အအေး ကာလတို Teflon တိုက်တေနီယမ် တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် တိုက်တေနီယမ်နည်းပညာများ အသားပေး
US Radar မှရုရှားသူလျှိုသင်္ဘောပျောက်ကွယ်ခြင်း - ရုရှားသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ရန်စီစဉ်နေပါသလား။